Otu teepu foil ọla kọpa na-arụ ọrụ na-ezo aka n'otu akụkụ nwere elu nrapado na-anaghị arụ ọrụ, na-enweghị isi n'akụkụ nke ọzọ, yabụ ọ nwere ike iduzi ọkụ eletrik; n'ihi ya, a na-akpọ ya otu foral conductive copper foil.
Ihe mkpuchi ọla kọpa electrolytic maka mkpuchi nke CIVEN METAL mepụtara nwere ike chebe akara elektrọnik na nnyonye anya ngwa ngwa n'ihi ịdị ọcha dị elu nke ọla kọpa.
HTE Electrodeposited Copper Foils maka PCB
Ihe mkpuchi ọla kọpa electrolytic nke CIVEN METAL mepụtara nwere ezigbo nguzogide okpomọkụ na oke ductility. Ihe mkpuchi ọla kọpa anaghị agbaze ma ọ bụ gbanwee agba na oke okpomọkụ, yana ezigbo ductility ya na -eme ka ọ dị mfe iji ihe ndị ọzọ kpuchie ya.
ED ọla kọpa foils maka Li-ion batrị (abụọ-egbu maramara)
Ihe mkpuchi ọla kọpa Electrolytic maka batrị lithium bụ foil ọla kọpa mepụtara na CIVEN METAL mepụtara maka ụlọ ọrụ na -emepụta batrị lithium.
High-nkenke RA Ọla kọpa Foil
Ihe mkpuchi ọla kọpa akpọre akpọre akpọrọ bụ ihe dị mma nke CIVEN METAL mepụtara. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ngwaahịa foil ọla kọpa, ọ nwere ịdị ọcha dị elu, imecha elu ka mma, ịdị larịị ka mma, nnagide karịa na njikwa nhazi zuru oke.
Na -emeso RA ọla kọpa foil
A na -emeso foil ọla kọpa nke RA bụ otu akụkụ kpuchiri nkenke foil ọla kọpa ka ọ wee nwekwuo ike bee. Ala dị larịị nke foil ọla kọpa na -amasị udiri oyi, nke na -eme ka ọ dịrị ya mfe iji ihe ndị ọzọ kpuchie ya ma ọ yikarịghị ka ọ ga -apụ apụ. Enwere ụzọ ọgwụgwọ abụọ bụ isi: otu ka a na -akpọ ọgwụgwọ na -acha ọbara ọbara, ebe ihe bụ isi bụ ntụ ntụ ọla kọpa na agba elu ya na -acha ọbara ọbara mgbe a gwọchara ya; nke ọzọ bụ ọgwụgwọ na -agba ọchịchịrị, ebe ihe bụ isi bụ cobalt na nickel ntụ ntụ na agba elu ya na -adị oji mgbe a gwọchara ya.
Nickel plated Ọla kọpa foil
Ngwongwo nickel nwere nkwụsi ike dị elu na ikuku, ike passivation siri ike, nwere ike mepụta ihe nkiri passivation dị gịrịgịrị na ikuku, nwere ike iguzogide mmebi nke alkali na acid, ka ngwaahịa wee kwụsie ike na ọrụ yana gburugburu alkaline, adịghị mfe ịchọpụta. naanị ka oxidized karịa 600 ℃; oyi akwa nickel plating nwere nrapado siri ike, ọ dịghị mfe ịdapụ; mkpuchi nickel plating nwere ike ime ka elu ihe sie ike, nwere ike melite ngwaahịa na -eguzogide na acid na nguzogide corrosion alkali, ngwaahịa na -eyi nguzogide, corrosion, arụmọrụ mgbochi nchara dị mma.
ED ọla kọpa foils maka FPC
Ejiri ọla kọpa elektrọnik maka FPC mepụtara ma rụpụta ya maka ụlọ ọrụ FPC (FCCL). Ihe mkpuchi ọla kọpa a nwere electrolytic nwere ductility ka mma, ịdị ala dị ala na ike peel ka mma karịa foils ọla ndị ọzọ.
Brass bụ alloy ọla kọpa na zinc, nke a na -akpọkarị ọla n'ihi agba aja aja edo edo ya. Zinc dị na ọla na -eme ka ihe ahụ sie ike ma na -eguzogide ya karị, ebe ihe ahụ nwekwara ike ike dị mma.
ED ọla kọpa foils maka Li-ion batrị (Ugboro abụọ-matte)
Ihe mkpuchi ọla kọpa maka otu lithium nwere akụkụ abụọ (okpukpu abụọ) bụ ihe ọkachamara CIVEN METAL mepụtara iji melite arụmọrụ nke mkpuchi electrode na -adịghị mma. Ọkpụkpụ ọla kọpa nwere ịdị ọcha dị elu, na mgbe usoro ime mkpọtụ gasịrị, ọ dị mfe dabara na ihe elektrọn na -adịghị mma ma ọ yikarịghị ka ọ ga -ada.